चलचित्रलाई बिराज चाहिदाँ भए टाढा तर किन फेरी अहिले चाहि माया गाढा ?? « Mazzako Online
चलचित्रलाई बिराज चाहिदाँ भए टाढा तर किन फेरी अहिले चाहि माया गाढा ??
अभिनेता विराज भट्ट फिल्म ‘पर्शुराम’बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा फर्कदैछन् । करिब ५ बर्ष नेपाली फिल्मलाई चटक्कै माया मारेपछि विराजको आगमन एकाएक हुँदैछ । अभिनेताले त्यस्तो बेला फिल्म क्षेत्र छाडे जतिबेला उनको आवश्यकता यो क्षेत्रलाई थियो । भोजपुरी फिल्म क्षेत्रमा नाम र दाम दुबै कमाएपनि विराज नेपालबाट भने हराएजस्तै भए ।
जतिबेला विराज यो क्षेत्रबाट टाटा गर्दै थिए, फिल्म क्षेत्र धराशायी बनेको थियो । धेरै कलाकारले यही क्षेत्रमा भविष्य छ र यसलाई बचाउनुपर्छ भन्दै काम गर्दै विराजले छाड्दा उनी स्वार्थी देखिएका थिए । यसैले विराजले स्वार्थीपन देखाएको फिल्म क्षेत्र र दर्शकले उनलाई कसरी लिन्छन् हेर्न बाँकी छ ।
अर्का अभिनेता सरोज खनाल पनि अमेरिकामा यूवा अवस्था बिताएर नेपाल फर्किए । उनलाई अझै नेपाली फिल्मका दर्शकले स्विकार गर्न सकेका छैनन् । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर, रमेश उप्रेती, गौरी मल्ल पनि यही सूचीमा पर्छन् । जसले फिल्म क्षेत्रलाई आफू अनुसारको प्रयोग गरे । यसैले पनि यही क्षेत्रमा निरन्तर लाग्ने कलाकारलाई दर्शकले बढी माया गरेको पाइन्छ ।